Amazon Prime Day: ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ် Gadget သတင်း
Eder Esteban | | အမေဇုံ
ဒီနှစ်မှာ Amazon Prime Day ကိုယနေ့ရော၊ မနက်ဖြန်ပါကျင်းပပေးတယ်။ နှစ်ရက်ကြာစတိုးဆိုင်တွင်ကမ်းလှမ်းချက်များအပြည့်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားအားလုံး၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်စဉ်းစားရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်း။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းချက်များကိုရယူရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်သည်။
သင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအတိုင်း Amazon Prime Day တွင်ကမ်းလှမ်းသည် အမေဇုံချုပ်အကောင့်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကသင့်ရဲ့ ၀ ယ်ယူမှုကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အပြင်ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို ၀ င်ခွင့်ရဖို့ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
ထိုအခါငါတို့သည်သင်ဤသူတို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအတွက်ကမ်းလှမ်းမှု။ အကယ်လို့သင်ဟာစမတ်ဖုန်း (သို့) လက်တော့အသစ်တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီပရိုမိုးရှင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာကောင်းတွေကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်အတွက်လူကြိုက်များတဲ့ဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသောအရာ ဒီအမေဇုံချုပ်နေ့အပေးအယူ ချုပ်အကောင့်ကဆိုသည်ပါပြီရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကသင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ဒီ link။ ၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏ content streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောအားသာချက်များစွာအပြင်အခြားပရိုမိုးရှင်းများကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သေချာတာကသင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
1 စမတ်ဖုန်းအရောင်းအ ၀ ယ်
2 အမေဇုံ Prime Day ကွန်ပျူတာအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
3 Tablet အရောင်းအ ၀ ယ်
4 Amazon Prime Day သည်စမတ်နာရီများနှင့်လက်ကောက်များကိုရောင်းချသည်
6 Amazon Prime Day သည်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည်
8 Amazon Prime Day သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည်
စမတ်ဖုန်းအရောင်းအ ၀ ယ်
Huawei P30 ၃၉၉ ယူရိုသာစျေးနှုန်းကို ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ပေးသည် Huawei P30 - စမတ်ဖုန်း ...ဒီ link မှာ။ " /]
Samsung ရဲ့ Galaxy S10 စျေးနှုန်း 23 ယူရို 699% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Samsung Galaxy S10 ...ဤနေရာတွင်ဝယ်ပါ။ » /]
OPPO Find X Lamborghini ကိုရနိုင်သည် ၈၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း ၄၇% လျှော့စျေး. OPPO Find X Lamborghini -...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
OPPO RX17 Pro ကို ဒီ Amazon Prime Day မှာယူရို ၃၄၉ ကိုသာဈေးနှုန်းနဲ့ ၄၂% လျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။ Oppo RX17 Pro၊ စမတ်ဖုန်း ...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
Xiaomi မှ Mi A2 သို့ ၃၄% လျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည် 158 ယူရို၏စျေးနှုန်း. Xiaomi MI A2 - စမတ်ဖုန်း ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Sအထူးလျှော့စျေး ၄၇% ဖြင့် Xperia XA2 Ultra သုံးမျိုးရှိပါသည်။ သာ 199 ယူရိုသည်။ Sony Xperia XA2 Ultra ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
အမေဇုံ Prime Day ကွန်ပျူတာအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
HP Omen ဂိမ်း mouse ကို 45% လျှော့စျေး, သာ 34,99 ယူရိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာဝယ်ပါ
Microsoft က Surface Pro626 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ 999,99% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Microsoft Surface Pro6...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
Apple က ၁၂ လက်မ MacBook ကို ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချလိုက်တယ် 999,99 ယူရိုစျေးနှုန်း. Apple MacBook (12 ...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
Logitech ကြိုးမဲ့мыш Amazon Prime Day တွင်ယူရို ၄၄.၃၀ သာ ၄၄% လျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Logitech MX Master Mouse ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
Lenovo Yoga 920-13IKB ပြောင်းလဲနိုင်သောလက်ပ်တော့ပ် 43 ယူရိုများအတွက် 899,99% ၏လျှော့စျေးနှင့်အတူ. Lenovo Yoga 920-13IKBဒီမှာဝယ်ပါ» /]
ASUS ROG Swift PG348Q - 34 ကွေးကောက်ဂိမ်း Monitor ကို ယူရို ၆၀၀ အတွက် ၄၅% လျှော့စျေး. ASUS ROG ဆွစ်ဖ် PG348Q -...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
LEnovo Legion Y530 ၁၅.၆ လက်မ laptop 25 ယူရိုများအတွက် 749,99% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Lenovo Legion Y530 သည် ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
၄၁ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးနှင့် Lenovo Tab E7 မြှင့်တင်ရေးအတွက်သာ 48,99 ယူရိုသည်။ Lenovo Tab E7 TB-7104F ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
လျှော့စျေး ၃၀% ဖြင့် Huawei MediaPad T5 159,99 ယူရိုသည် ဒီအမေဇုံချုပ်နေ့၌။ Huawei MediaPad T5 -...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Samsung Galaxy Tab 10 လက်မနှင့်လျှော့စျေး ၁၀ လက်မရှိသည် 149,99 ယူရို၏စျေးနှုန်း. Samsung Galaxy Tab A6 ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Lenovo Tab4Plus ဈေးနှုန်းသည် ၁၄၈.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၄၇% လျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်သည်။ Lenovo TAB4 10 PLUS -...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Amazon Prime Day သည်စမတ်နာရီများနှင့်လက်ကောက်များကိုရောင်းချသည်
Samsung ရဲ့ Galaxy Active ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဈေးနှုန်းသည် ၁၄၈.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၄၇% လျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်သည်။ Samsung Galaxy Watch ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Samsung Gear Sport အတွက် ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချသည် သာစျေးနှုန်း 149 ယူရို. Samsung Gear Sport ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GT ကို စျေးနှုန်း 48 ယူရိုသာအဘို့အ 119% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Huawei နာရီအမှတ်တံဆိပ် GT ဖက်ရှင် -ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Xiaomi မှ Amazfit Verge ကိုရရှိနိုင်သည် ၅၇% လျှော့စျေး 119,20 ယူရိုစျေးနှုန်းသည်။ Lenovo TAB4 10 PLUS -...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
25% လျှော့စျေးနှင့်အတူ Fitbit Versa Lite ကို သာ 119,90 ယူရို၏စျေးနှုန်းမှာ။ Fitbit Versa Lite - နာရီ ...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
အမေဇုံထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်ရေးအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် ဒီအမေဇုံချုပ်နေ့၌။ အခြားကုမ္ပဏီများအကြားတွင်ကုမ္ပဏီမှ၎င်း၏ Echo စပီကာများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုပွဲ၏နှစ်ရက်အတွင်း၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး နှင့်အတူအမေဇုံမီး7၅၇% လျှော့စျေး ယူရို ၄၉.၉၉ အတွက်သာ တက်ဘလက် Fire 7, မျက်နှာပြင် ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
ရရှိနိုင်သည့် Amazon Fire 8 HD Tablet ကို ယူရို ၆၀၀ အတွက် ၄၅% လျှော့စျေး. တက်ဘလက် Fire HD 8 | ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
Amazon Kindle 22 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ 69,99% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
a မှာ 23% လျှော့စျေး Kindle Paperwhite ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း. Kindle Paperwhite -...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
Amazon Echo Input တွင်ယူရို ၂၀ လျှော့စျေး အမေဇုံချုပ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်သည်။ ပဲ့တင်သံ Input, အနက်ရောင် -...ဒီ link မှာ။ " /]
Amazon Echo Dot တွင်ယူရို ၃၀ လျှော့စျေး အရာယခု 29,99 ယူရိုမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပဲ့တင်သံ Dot (တတိယ ...ဒီမှာဝယ်ပါ» /]
အမေဇုံ Echo စပီကာကိုချွတ်၏ 40% သာ 59,99 ယူရိုစျေးနှုန်းနှင့်အတူ။ အမေဇုံပဲ့တင်သံ (2nd ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Amazon Prime Day သည်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည်
၄၂ လက်မအရွယ်ရှိ Sony Smart TV ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် ယူရို ၃၉၉ နဲ့ ၄၁% လျှော့စျေး. Sony KD43XF7004BAEP -...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
တီဗီ Philips က Ambilight 55OLED803 / 12 စျေးနှုန်း ၁,၁၄၉ ယူနစ်အတွက် ၂၈% လျှော့စျေး ၅၅ လက်မ။ Philips တီဗီ ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
၅၉ လက်မအရွယ် LG သည် Smart TV ကို ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည် သာစျေးနှုန်း 849 ယူရို. LG TV NanoCell AI၊ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
Samsung သည် ၅၅ လက်မ 4K LED Smart TV ဖြစ်သည် 30 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ 699% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Samsung 4K UHD 2019 ...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
Sharp LC-60UI9362E -aနှင့်အတူ ၆၀ လက်မစမတ်တီဗွီ သာ 49 ယူရိုများအတွက် 559,90% လျှော့စျေး စျေးနှုန်း။ Sharp က LC-60UI9362E -...ဒီ link ကို» /] မှာရရှိနိုင်။
အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ Stick စျေးနှုန်း ၂၄.၉၉ အတွက်သာ ၃၈% လျှော့စျေးဖြင့်ပေးသည်။ မီးသတ်တီဗီ Stick | အခြေခံ ...ဒီ link မှာဝယ်ပါ။ » /]
Canon EOS 6D MK II - DSLR ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ 26.2 MP ၏ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၂၀၀ လျှော့စျေးဖြင့် ၁,၇၇၉၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ Canon EOS 6D MK II သည် ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
Sony Alpha 6000 - ၂၄.၃ MP EVIL Camera 51% လျှော့စျေးနှင့်အတူ 439 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ။ Sony Alpha 6000 - ကင်မရာ ...ဒီ link မှာရရှိနိုင်ပါ။ » /]
YI 4K + အားကစားပစ္စည်းများ သာ 160,99 ယူရို၏စျေးနှုန်း ၎င်း၏စျေးနှုန်းအပေါ်တစ် ဦး 46% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ ရီ 4K + အားကစားကင်မရာ၊ဤနေရာတွင်ဝယ်ပါ။ » /]
GoPro HERO7 အနက်ရောင် - လှုပ်ရှားမှုကင်မရာa၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း 14% ၏လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ Gopro Hero7 အနက်ရောင် ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Amazon Prime Day သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည်
Ultimate Ears Boom 2၊ ကြိုးမဲ့ Bluetooth Speaker၊ သာ 57 ယူရိုများအတွက် 59,99% လျှော့စျေး. နောက်ဆုံးနားနား BOOM2...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Bose - SoundLink II - ဘလူးတုသ်နားကြပ် စျေးနှုန်းမှာ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့် ၁၅၄.၉၉ ယူရိုစျေးရှိသည်။ Bose SoundLink II သည် ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
SanDisk Ultra - 128GB မှတ်ဉာဏ်ကဒ် သာ 18,99 ယူရိုသည်။ SanDisk Ultra ကဒ် ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
Bang နှင့် Olufsen ကြိုးမဲ့လည်ပတ်နိုင်သည့်နားကြပ်aယူရို ၆၀၀ အတွက် ၄၅% လျှော့စျေး. Bang & Olufsen ...ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ» /]
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » အမေဇုံ Prime Day 2019 ၏အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများ - တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်
EaseUS Data Recovery Wizard Pro - ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေတာတွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်